Fampirantiana nataon'ny fikambananan'ireo teratany Indiana | Primature
. Secrétariat Général Adjoint du Gouvernement
Fampirantiana nataon’ny fikambananan’ireo teratany Indiana
Mahazoarivo, ny 27 martsa 2021 – Nanokatra ny fampirantiana tanterahin’ny fikambanan’ireo teratany Indiana etsy amin’ny foiben’ny masoivoho Indiana ny Praiminisitra Ntsay Christian, androany maraina, ary nanatrika ny lanonana ny minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny Ambasadaoron’i Inde, miasa sy monina eto amintsika.
Efa manakaiky ny 2000 ny isan’ireo mpikambana ao, izay fantatra amin’ny fiteny mahazatra hoe “karana”, ka ny tantara sy ny nahatongavan’izy ireo voalohany teto Madagasikara no ampirantiana, izay fototra rahateo niandohan’ny fikambanan’ny teratany karana eto an toerana amin’izao fotoana izao.
Saika misehatra amin’ny fandraharahana ara-toekarena avokoa ny teratany karana monina eto amintsika, ary maro amin’izy ireo no nomena ny zom-pirenana Malagasy ka efa mizaka izany ankehitriny. Hita taratra fa efa ela tokoa no nisian’ny fifandraisana ara-diplaomatika teo amin’i Madagasikara sy Inde, fifandraisana izay mbola miha-tsara hatrany amin’izao vaninandro iainantsika izao. Teo no nitondran’ny Praiminisitra fanazavàna ka nilazany fa “ao anatin’ny tantaran’ny firenentsika ny fikambanana teratany karana”. Nambarany fa nijery ny mahakasika ireo mivelona eto amintsika ka nangataka ny zom-pirenena, ny goverenmanta nifandimby teo aloha. Ny tombony amin’izany, hoy ihany ny Praiminisitra, dia ny fahafahan’izy ireo miary sy mampiasa ny volany eto an-toerana na dia azon’izy ireo atao tsara aza ny manao izany any amin’ny firenena niaviany, na koa any amin’ireo firenena manodidina antsika.
Tsara tsiahivina, hoy ny Lehiben’ny governemanta, fa “manao antso avo amin’ny mpiara-miombon’antoka avy any ivelany sy amin’ny mpandraharaha Malagasy sy vahiny isika eto Madagasikara, ka raha efa misy mpandraharaha afaka mampiasa ny volany, manangana orinasa, mamorona asa eto amintsika, dia ankasitrahina izany”, ary zava-dehibe ny fanomezantsika lanja an’izany fiaraha-miasa izany, hoy izy teo am-pamaranana.
← Fihaonana tamin’ny delegasiona avy amin’ny FMI
Vonona amin’ny fandraisana marary ny Centre de Traitement Covid-19 Mahamasina →